Uri mugadziri kana kutengesa kambani?
Isu tiri mugadziri wegirazi rakamisikidzwa, girazi rakadzikama uye girazi rakavharika uye girazi.
Ndezvipi zvinhu zvaunoshandisa? ?
All ichiyangarara girazi kubva Xinyi Glass, CSG, Jinjing nezvimwewo. Iyo PVB yatinoshandisa ndeye Yakadzikama PVB, SGP, Saflex, nezvimwe.
Ndeipi girazi rako package?
Mapepa, PE, Cork mat, chengetedza mafirimu interleave, Plastic kona inovhara makona mana egirazi, ine yakasimba plywood makreyiti, akawanda sarudzo.
Custiomzed bhokisi rine logo zviripo.
Carton package inowanikwa.
Mirror ine chengetedzo firimu inowanikwa.
Hongu, isu tinogara tichishandisa mhando yepamusoro kutumira kunze. Isu tinoshandisawo hunyanzvi kurongedza zvinhu zvine njodzi uye yakasimbiswa inotonhorera yekuchengetedza vafambi kune tembiricha inonzwisisika zvinhu. Nyanzvi kurongedza uye zvisiri-zvakajairwa kurongedza zvinodiwa zvinogona kupinza imwezve muripo.
Chii chinonzi garandi yemhando yepamusoro?
Tinogona kupa garandi yemhando yepamusoro mukati memakore gumi yegirazi rakaomeswa, rakapfava uye rakamonerwa, makore mashanu garandi yekuratidzwa kwegirazi rakamisikidzwa kubva musi wekutumira kwechigadzirwa.
Zvakadii nezveako-yekutengesa sevhisi?
Isu tinopa 7 * 24 maawa mushure-kutengesa basa
Chero chero matambudziko ehunhu isu tinoda vatengi kuti vape mafoto kwatiri, Kuti tione zvikanganiso zvekugadzira kana kutakura matambudziko kwatiri, Chero chakakoromoka kana chisina kugadzirwa kugadzirwa, Isu tinobva tadzosera kana mahara kuwedzera inotevera inotevera odha.
Isu tinovimbisa kupindura chero mibvunzo mukati maawa manomwe .Kudzosera mari uye kutsiva kwekugadzira kwakanganisa, Chero girazi kubva kukambani yangu logo yehupenyu warandi.